Lyrical Photo Video Status & Story Maker အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
၏ဖော်ပြချက် Lyrical Photo Video Status & Story Maker
ဂီတကိုခံစားခြင်းသည်ဓာတ်ပုံများနှင့်သင်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းများပါသောအကောင်းဆုံးစာသားဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူအက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်။ ၆၀ စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲသင့်ဓာတ်ပုံနဲ့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတဲ့ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုဖန်တီးပါ။ ဤသည်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Whatsapp & instagram အဆင့်အတန်းနှင့်ဓာတ်ပုံနှင့်ဂီတဖြင့်ပုံပြင်ဖန်တီးသူဖြစ်သည်။ Lyrical Photo Video Status & Story Maker အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်မွေးနေ့၊ ချစ်ခြင်း၊ ဝမ်းနည်းဖွယ်၊ ချစ်ကြည်ရေးနေ့၊ Lyrical Photo Video Status & Story Maker သည်သီချင်းနှင့်အတူ lyrical video ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံး video editing app ဖြစ်သည်။ ဤသီချင်းစာသားတွင်ဗွီဒီယိုတွင် 1000 ထည့်နိုင်သည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Video Template တစ်ခုရှိသည်။
Lyrical Photo Video Status & Story Maker သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသီချင်းများ၊ သီချင်းစာသားများစတိုင်များ၊ ဓါတ်ပုံစီစစ်ခြင်း၊ အခင်းအကျင်း၊ ဗီဒီယိုကူးယူခြင်းများပါ ၀ င်သည့်အစွမ်းထက်သည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တေးသွားဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူကိရိယာဖြစ်သည်။ Lyrical ထုတ်လုပ်သူသည်တေးသီချင်းများ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအခြေအနေ၊ ရင်ခုန်စရာ၊ ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်၊ ပွဲတော်သီချင်းများ၊ ဘုရားအဆင့်အတန်းနှင့်ရုပ်ရှင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများစသည်တို့ကဲ့သို့သောရှေးဟောင်းသီချင်းများစုဆောင်းထားသောစာအုပ်များရှိသည်။
သီချင်းစာသား Lyrical Photo Video Status & Story Maker:
1.Wishes & Quotes
4.WhatsApp အခြေအနေနှင့် Instagram Story Videos
5.Short ဗီဒီယိုများ ၆။ ဘောလီးဝုဒ်နှင့်ဟောလီးဝုဒ်မှ ၇ ချက်တိုဗီဒီယိုများ၊ ၈.TV အတင်းအဖျင်းများနှင့်ဝက်ဘ်စီးရီးများ။ ၉။ ရုပ်သံဗီဒီယိုများ။ 10. ကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး
11.Love, Sad & Romantic status
၁။ စွမ်းရည်ပြည့်ဝသောသီချင်းစာသားများနှင့်တေးဂီတဖြင့်ဖန်တီးထားသော ၂။ ​​ထူးခြားသောစိတ်ကြိုက်ဗီဒီယိုအခင်းအကျင်း
3.1000 Love, Sad, ဂူဂျာရတီ၊ မာရတီ၊ ပနျခြာပီ, အင်္ဂလိပ်, 4. Romantic သီချင်းစာသား။ 4.Tamil, တီလီဂူလာနှင့်မလေးရာလမ်ယာမ်ား။ ၅ ။ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်လှပသောဘောင်များ။ 6.MP3 Cutter & ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းမြည်သံပြုလုပ်သူ။ ၇။ လူမှုမီဒီယာအခြေအနေ Saver
၈။ Photo Editor တစ်ခုတည်းတွင်ပါ ၀ င်ခြင်း။ ၉။ ဓာတ်ပုံနှင့်ဓာတ်ပုံအကန့်အသတ်မရှိဖန်တီးနိုင်သည့်အကန့်အသတ်များပြည့်စုံသော Video များ 10.Fast & လူမှုမီဒီယာတွင်မျှဝေရန်လွယ်ကူသည်။ ၁၁။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဗွီဒီယိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာ။ ၁၂။ အချစ်၊ ဝမ်းနည်းစရာ၊ အချစ်ဇာတ်လမ်း၊ နှစ်ပတ်လည်နေ့၊ ပွဲတော်၊ ဗီဒီယိုအခင်းအကျင်းများ။ ၁၃။ လွယ်ကူသောအသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်နှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ
14 ။ Cool စာသား၊ စတစ်ကာ၊ effect နှင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှု။ ၁၅။ ဗွီဒီယိုအတွက်ကောလိပ်၏သောင်းချီသောအကြောင်းအရာ
1. သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောသီချင်းကိုစာကြည့်တိုက်မှရွေးပါ2သင်၏စာသားပုံစံကိုရွေးချယ်ပါ။ 3. ဓာတ်ပုံထည့်ပါ။ 4. သင်၏သီချင်းစာသားများကိုဒေသခံသိုလှောင်မှုတွင်တင်ပို့ပါ။ ၅။ လူမှုရေးမီဒီယာများတွင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ Instagram၊ WhatsApp,
tiktok, Tak tak စသည့်လူမှုရေးမီဒီယာများတွင်လည်းမျှဝေနိုင်သည်။ Josh, Moj နှင့်အခြားလူမှုမီဒီယာများလည်းပါဝင်သည်။
1 ။ အင်္ဂလိပ် Lyrical Video Status Maker
2.Bhojpuri Lyrical Video Status Maker
3 ။ Rajshthani Lyrical Video Status Maker
4.Arabic Lyrical Video Status Maker
5.Malayalam Lyrical Video Status Maker
6.Kannada Lyrical Video Status Maker
7.Punjabi Lyrical Video Status Maker
8 ။ တမီလ် Lyrical Video Status Maker
9.Marathi Lyrical Video Status Maker
10.Telugu Lyrical Video Status Maker
11.Urdu Lyrical Video Status Maker
VN App Trending Lyrics Video Editing | Vn Video Editor Lyrics Editing | How To Make Lyrics Video
How To Create Lyrics Video In VN | VN Lyrics Edit | Vn Video Editor Tutorial